Kuratidza zvinyorwa neelebheri 3D
Snezka 3D mepu
Sněžka (Polish Śnieżka, ChiGerman Schneekoppe) iri nemamirazuva zana nemakumi matatu neshanu (yakambotaurwa.) Nekuda kwekuti chikamu cheSněžka chiri muPoland (anenge 1603,3 cm kumusoro), iyo yepamusoro soro iri muCzech Republic ndiLuční hora.
Icho chinhu chinonyanya kukosha chekumabvazuva kweGiant Mountains. Muganhu weCzech-Polish unoyambuka mutsara weSněžka, nzvimbo yakakwirira iri paPoland kurutivi rwemuganhu, mashoma mamita kumavirira kweChapel yeSts. Lawrence. Kubva pamakiromita 4,5 ari kure Pec pod Sněžkou cable motokari inokuendesa kumusoro. Kurutivi rwokuchamhembe, rutivi rwePoland runova mumupata weRwizi Lomnička, rutivi rwekumadokero kusvika kuUsuké peat, kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kusvika ku Obří důl, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kusvika kumupata weJelení rukova uye kumabvazuva kusvika kuGiant Ridge.
Pamusoro pegomo pane mabwe uye ine nzvimbo inosvika zviuru zana nemakumi matatu nemakumi maviri nemaviri m120. Sezvo Sněžka iri gomo refu pane imwe nzvimbo yakafara, pane yakakura panoramic maonero kubva kumusoro. Iyo yepamusoro inoshanda senge inowanzo kushanya nzvimbo yekushanya uye kuti ikwanise kuita zvinokwanisika kushandisa huwandu hwevashanyi nzira…
Labsky mine 3D mepu
Nzvimbo yeElbe mine iri muKrkonoše National Park uye inomhanya kubva kuLabská bouda kuenda Špindlerův Mlýn. Bala Harrach akavaka mugwagwa wekutanga kuburikidza neElbe mine pakupera kwe19. century. Kureba kwemugodhi kunenge kune 8 makiromita uye inotungamirwa neiyo yebhuruu mucherechedzo chiratidzo.